Politika momba ny tsiambaratelo | VAOVAO FOTOTRA
Fanambarana fanampiny momba ny fiarovana ny angona nasionaly
Koa satria ny safidy dia manolotra endri-javatra isan-karazany, be dia be ny isan'ny mofomamy, saingy tsy mila manahy ianao. Ohatra: Raha ny fampiasa mba hanombanana ny fandraisana anjara, ilaina ny mofomamy iray misaraka isaky ny anjara. Ny mofomamy miaraka amin'ity anarana ity mazàna dia tsy voasokajy. Navoaka ihany koa, ny atiny ivelany dia manondro pejy voalohany, ary mila mofomamy. Azonao atao ihany koa ny mahita izany fampahalalana izany ao anaty lisitry ny mofomamy.